साँसद पौडेललाई आफ्नै बोली गलपासो : सामाजिक सञ्जालको हाँसो ! जिल्लाबासीको प्रश्न,साँसद ज्यू, बहुमतको सरकार, ठेकेदार भन्दा कमजोर हुँदो रैछ हो ? – ebaglung.com
२०७६ असार २८, शनिबार १५:४४	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
राम सुबेदी, बुर्तिवाङ २०७६ असार २८ । मध्यपहाडी लोकमार्ग अन्तरगत बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधे खण्ड वर्षौँदेखि अलपत्र पर्दै आएको छ । २०७५ फागुन महिना सम्म कालोपत्रे नगरे लोकमार्ग निर्माणका ठेकेदारलाई कार्वाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटिका सदस्य एवं बागलुङ क्षेत्र नं. २ का साँसद देबेन्द्र पौडेलले बालेका थिए ।
साँसद पौडेलले, २०७५ भदौ ७ गते समय सीमावधीभित्र काम नभएका गुनासो जनताबाट आएको भन्दै लोकमार्ग आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदार सँग काठमाडौँमा छलफल गरे । छलफलमा बागलुङदेखि बिहुको १३ किलोमिटर कालोपत्रेको जिम्मा पाएको भारत सिदिशाह कम्पनी र बिहुदेखि धोडाबाधेसम्म कालोपत्रे तथा हटिया सम्मको सडकको स्तरोन्नती गर्ने जिम्मा पाएको Mp/scs/ecc कम्पनीका ठेकेदारलाई भेटेर तोकिएकै समय सिमामा काम गर्न पौडेलले निर्देशन गरेको सञ्चार माध्यमहरुमा समाचार छापिएको थियो ।
साँसद, त्यो पनि क्षेत्रको प्रतिनिधि, अझै दुई तिहाई बहुमत सरकारको प्रतिनिधिले निर्देशन गरे अव सडक बन्ने भयो भन्ने जनतालाई थियो । अहिले आएर साँसदले निर्देशन गरेका कम्पनीले नत, त्यहाँको काम नै सकेको अवस्था छ, नत, साँसदले भने झै कार्वाही केही होला भन्ने पत्याउने ठाउँनै देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा साँसद पौडेलले बोलेको त्यसबेलाको बोली पौडेलका लागि गलपासो सावित हुने देखिन्छ । यही गलपासो सामाजिक सञ्जालमा हाँसोको विषय बन्दैछ । के यस्तै हुन्छ होला जिम्मेवार प्रतिनिधिको बोली जस्लाई जनताले साँच्चै पत्याउनु पर्ला ?
काठमाडौको एक कार्यक्रममा साँसद पौडेलले, ‘बागलुङ सदरमुकामदेखि घोंडाबाँधे तथा त्यहाँबाट हटियासम्म ३२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे तथा स्तरोन्नती काम सम्पन्न गर्ने समय सीमा ६ महिना भएको बताए । यदि समयमै काम भएन भने, आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउछौँ भन्ने चेतावनी पनि दिए ।’ साँसद पौडेलले, ‘जनताका आवश्कतालाई हेरेर बिकाश गर्नुपर्दछ, यदि बिचमा कुनै समस्या आएमा स्थानीय निकाय, जिल्लाका सिडियो तथा केन्द्र सरकार छ, उनीहरूसँग समन्वय गरि काम गर्नुपर्दछ । काममा त्यसमा तलमाथि भयो भने कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्ने बताएका थिए ।’
६ महिना भित्र कालोपत्रे नगरे कार्बाही गर्ने सांसदको चेतावनीलाई ठेकदारले लगाई दिए धोँती !
बिहुदेखि हटियासम्म सडकको ठेक्का २०७२ माघको १० गते सडक स्तरउन्नति सँगै कालोपत्रेका लागि ३५ करोड ३९ लाख २ हजार ७ सय ५७ रुपैयामा लिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि ठेकेदारले कामदारको अभाव देखाउदै काम गरेको छैन । उल्टै म्याद थपेर बसेको छ । पटक पटक म्याद थपिने र त्यसमा राज्यले केही गर्न नसक्ने हो भने, यहाँ राज्य निरिह हो भन्दा के फरक पर्छ र ।
यस्तै बागलुङदेखि बिहुसम्मको १३ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको ठेक्का पाएको भारत सिदिशाह कम्पनीले ३९ करोड ७१ लाखमा ८७ हजारमा ६ सय (मूल्य अभिवृद्धि कर सहित) २०७३ माघको १४ गते नै ठेक्का लिएको थियो । उक्त कम्पनीले अहिले सम्म ६० प्रतिशतमात्रै काम सकेको मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना पश्चिम दाङका प्रमुख सुर्यबहादुर भाटको भनाई छ । समयमै काम नहुँदा अहिलेपनि मध्यपहाडी लोकमार्गको सडक सहज छैन । साँसदको कार्वाहीको बोली र फिल्डको काम गराई कतैपनि तालमेल नहुने देखिएपछि सामाजिक सञ्जालमा पौडेलको त्यो बोलीको व्यङ्ग्य गरिएको छ । साँसद ज्यू, बहुमतको सरकार, ठेकेदार भन्दा कमजोर हुँदो रैछ हो ?